काठमाडौं ।आज देशले नयाँ संविधान पाएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । ५ वर्ष अघि आजकै दिन जारी भएको संविधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।देश संघीय संरचनामा गएको छ । अहिले तीनवटै तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । संविधान कार्यान्वयनका चरणमा रहेका बेला सर्वसाधारणले यसलाई कसरी अनुभूति गरिरहेका छन ? संविधानले ग्यारेण्टी गरेका हक अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् ? संविधान जारी भएपछि आम जनताले के पाए ?आज हामीले यहि विषयमा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा भेटिएका सर्वसाधारणसँग सोधका छौँ । हेरौं यो भिडियोमा :https://youtu.be/8MmYQfaCFew
३ आश्विन २०७७, शनिबार १७:४०
आज देशले नयाँ संविधान पाएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । ५ वर्ष अघि आजकै दिन जारी भएको संविधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
देश संघीय संरचनामा गएको छ । अहिले तीनवटै तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । संविधान कार्यान्वयनका चरणमा रहेका बेला सर्वसाधारणले यसलाई कसरी अनुभूति गरिरहेका छन ? संविधानले ग्यारेण्टी गरेका हक अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् ? संविधान जारी भएपछि आम जनताले के पाए ?
आज हामीले यहि विषयमा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा भेटिएका सर्वसाधारणसँग सोधका छौँ । हेरौं यो भिडियोमा :
Prevप्रविन बेडुवालको आवाजमा नयाँ गीत ‘पहिलो नजरमा चाहन्छु’ सार्वजनिक (भिडियो)